Sawiro:- Degmo katirsan Somaliland oo maanta kadhacay banaanbax kadhan ah Muuse Biixi. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Sawiro:- Degmo katirsan Somaliland oo maanta kadhacay banaanbax kadhan ah Muuse Biixi.
Magaalada Caynaba saaka waxa ka socda mudaharaad rabshada wata kaas oo laga soo horjeedo xeerkii maalintii shalay ay ansixiyeen golaha wakiillada Somaliland ee degmooyinka somaliland Darajooyinka lagu siiyey.
Dadka ayaa Madaxweynaha Somaliland iyo xukuumaddiisa ku dhaliilay in ay ka gaabiyeen meel marinta balanqaadkiisii ahaa in uu degmadaasi ka dhigi doono Derejada B.
Previous articleAkhriso:- Puntland oo digniin degdeg ah udirtay DFS + khilaafka oo sii kordhay.
Next articleDaawo:- Ciidanka Puntland oo eryanaya Suxufi taageeray RW Kheyre + Muuqaal uu soo duubay.
mingistume soo Dag July 21, 2019 At 6:00 pm
SOMALILAND”: A Good Call Of Soomaali/weyn?…Midnimo?…..
1)Reer waqooyi iyo reer koonfur. … Somaliland iyo Somalia wixii ka danbeeyey xornimadii 1960 iyo gumaysatashee reer yurub,,
soomaalidu: Maanta: Waa Nidaam-Diid Cidna Ma xukumi-karto/Maanta.?
mingistume soo Dag July 21, 2019 At 6:31 pm
Goorma ayay soo bilaabatay fikradda mideynta Soomaaliya?…
Dhanka Soomaaliya waxaa muddo dheer soo jirtay fikradda mideynta shanta Soomaaliyeed oo kala ah Koonfurta, Waqooyiga, Jabuuti, Ogaden, iyo NFD.?)( jamhuuriyad iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaani.)(Qoysland).
SOMALILAND”: VS SOMALIA VS Wadar Iyo Waaxid Keeba Waalan? (Xaaji saalax ma ila socota)
Ahmed July 21, 2019 At 9:52 pm
Reer Caynabo ha dhisteen Dagmada si derejadeeda loo kordhiyo. Mudaharaadka horumarna ku data. Tire radana wadada dhinaceeda ku guba si aaney waxyeelo usoo gaadhin wadada. Kkkk Dedaala weydin gaadhi foontaane.